पोको X3 केवल कुनाको वरपर र यसको मूल्य अपमानजनक हुनेछ! | Androidsis
पोको X3 केवल कुनाको वरपर र यसको मूल्य अपमानजनक हुनेछ!
शाओमीको पोको परिवार एसियाली कम्पनीको तर्फबाट एक नयाँ मोड भएको छ। डिमोलिसन मूल्यमा उच्च-गुणवत्ता टर्मिनलहरू प्रस्ताव गर्नको लागि, यन्त्रहरूको दायरा जो एक उच्च-हार्डवेयर प्रस्ताव गर्न, सौन्दर्यतामा कटौती गर्न प्रतिबद्ध छन्।
पोकोफोन फोनको सफलता देखेर शाओमीले आफ्नो नयाँ एक्स परिवारको साथ मिड-रेन्ज वाटरलाइनमा हमला गर्ने निर्णय गर्यो र अब हामी पोको एक्स new को नयाँ विवरण ल्याउँदछौं जुन अर्को फोन पहिलेभन्दा झनै नजिक देखिन्छ।
यो पोको एक्स of को मूल्य हुनेछ
र यो त्यो हो, शाओमीको आधिकारिक पृष्ठमा, शाओमी mi मीका साथीहरूले संकेत गरेझैं उनीहरूले गल्तीले पोको एक्स of को मूल्य प्रकाशित गरे। यद्यपि यो सत्य हो कि तिनीहरूले अन्ततः मोबाइल हटाए, हामी पहिले नै पुष्टि गर्न सक्दछौं कि स्पेनमा यसको आधिकारिक मूल्य २२eयुरो हुनेछ। एक घोटाला आंकडा, अधिक यदि तपाईं यस उपकरणको विशेषताहरु लाई ध्यानमा राख्नुहुन्छ।
सुरू गर्नका लागि, हामी एक बनेको पर्दा भेट्टाउँछौं .6.67..XNUMX इन्च IPS LCD प्यानल जुन पूर्ण HD रिजोलुसन र १२० हर्ट्जको स्क्रिन रिफ्रेस रेटमा पुग्छ। यसको लागि हामीले क्वालकॉमले हस्ताक्षर गरेको स्नैपड्रैगन 120२ प्रोसेसर थप्नु पर्छ। एक मध्यम दायरा SoC जसले शीर्ष प्रदर्शन, साथै उत्कृष्ट उर्जा क्षमता प्रदान गर्दछ।
र यो अतिरिक्त लाभ हो, किनकि पोको एक्स of को हुड अन्तर्गत हामी एउटा विशाल 3,१5.160० एमएएच ब्याट्री भेट्टाउँछौं जुन 33 65 डब्लू सम्मको द्रुत चार्जिंगको साथ पनि आउँदछ। यस तरिकाले, मात्र6128 मिनेटमा हामीसँग फोन पूर्ण रूपमा चार्ज हुनेछ। केकमा आइसिing RAM जीबीको र्याम हो, १२XNUMX जीबीको आन्तरिक भण्डारणको अतिरिक्त।
फोटोग्राफिक सेक्सनको सन्दर्भमा पोको एक्स camera क्यामेरा यसले 64 20 मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सर प्रदान गर्दछ, यद्यपि हामीसँग बाँकी लेन्सहरूमा बढी डाटा छैन। अवश्य पनि, हामी निश्चित गर्न सक्छौं कि फ्रन्ट क्यामेरा २० मेगापिक्सलको हुनेछ। सुरूवात मिति को बारे मा, फोन सेप्टेम्बर on मा बजार हिट अपेक्षा गरिएको छ। र हामी पहिल्यै नै अनुमान लगाउँछौं कि यसले नयाँ बिक्री बमबेल हुनका लागि मार्गहरू औंल्याउँछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Xiaomi » पोको X3 केवल कुनाको वरपर र यसको मूल्य अपमानजनक हुनेछ!
टिकवाच प्रो ले यस स्मार्टवाचमा ठूलो स्वायत्तताको प्रतिज्ञा गर्दछ
[VIDEO] अगस्तको सर्वश्रेष्ठ Androidsis खेल: महान सभ्यता VI